Gobolka Waqooyi Bari oo u guntaday wax-ka-qabashada waxbarashada heerkeedu liito - Sabahionline.com
Gobolka Waqooyi Bari oo u guntaday wax-ka-qabashada waxbarashada heerkeedu liito
Febraayo 21, 2013
Mas'uuliyiinta waxbarashada ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegay in ay layaabeen heerka liita ee gobolku ka galay Shahaadooyinka Imtixaanaadka Dugsiyada Hoose (KCPE) ee 2012-kii.
Arday kuwa dugsiga hoose ah oo wax ku baranaya fasal maran. Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa kaalinta ugu hoosaysa ka galay kala horreeynta Shahaadada Imtixaanaadka Dugsiyada Hoose ee Kenya sannadkii 2012-kii. [Simon Maina/AFP]
Barayaasha Kenya ayaa welwel ka muujiyay natiijada liidata ee ardayda dugsiyada dowladda
Tiradii ugu badnayd ee arday Somaliland ah ayaa isu diyaarinaysa imtixaanaadka
"Waalidiinta, barayaasha, shaqaalaha, hoggaamiyayaasha iyo ardayduba waxay sameeyay wax walba oo ay awoodeen, waxa ayna ku rajo-weynaayeen in ay ka fiicnaan doonaan natiijooyinkii sannadihii hore," ayuu Sabahi u sheegay Khasnajiga Ururka Maamulayaasha Dugsiyada Hoose ee Kenya (KEPSHA) Ibrahim Boya.
"Markii natiijada lasii daayay 28-kii January, ayaa degaannada gobolka ee Gaarisa, Wajeer iyo Mandhera waxa ay galeen kaalimaha ugu hooseeya ee 47-ka degaan ee dalka," ayuu yiri. "Waxaan dareennay in dadaalladeennii oo dhan ay noqdeen hal bacaad lagu lisay."
Degaanka Mandhera ayaa ugu hooseysay dalka isagoo cel-celis ahaan 182 dhibcood ka helay 500 oo suuragalka ahaa. Degaanka Kirinyaga oo ka tirsan Gobolka Bartamaha ayaa kaalinta koowaad ku galay 273 dhibcood.
Boya, oo sidoo kale ah maamulaha Dugsiga Hoose ee Furaha Wajeer, ayaa sheegay in madaxda waxbarashada ee maxalliga ah ay ku han-weeynaayeen in degaannada gobolka ay gali doonaan kaalimaha hore.
Hannaanka waxbarashada oo lagu niyad-jabayo
Ardayda dalka Kenya ayaa laga doonayaa in ay galaan imtixaanka KCPE dhammaadka fasalka sideedaad, oo ay helaan ugu yaraan 200 oo dhibcood si ay ugu gudbaan dugsiga sare.
Maxamed Haashim Cabdi, oo wiilkiisu u fariistay imtixaankii sannadkii hore Dugsiga Hoose ee Sala ee Mandhera, ayaa sheegay in uu dareemayo in siddeeddii sano ee uu wiilkiisu wax baranayay ay ahaayeen waqti lumay. Dugsiga ayaa galay kaalinta ugu hooseysa isagoo helay cel-celis ahaan 120 dhibcood.
"Wiilkayga waxa uu helay 102 dhibcood oo kamid ah 500 ee dhibcood ee suuragalka ah, mana jiro dugsi sare oo aqbali doona," ayuu u sheegay Sabahi. "Waxa i xanuunjinaya ayaa ah in madaxda xukuumadda ee ku sugan tuuladayda ay igu qanciyeen in aan wiilka dugsiga geeyo si wax loo baro, halkii uu ii ilaalin lahaa ariga qoyska."
Natiijooyinka caynkan oo kale ah waxa ay niyadda ka dili doonaan waalidiin badan oo reer miyi ah kuwaasoo wax badan u huray sidii ay caruurtooda ugu diri lahaayeen dugsi, ayuu yiri.
Madaxa waxbarashada Degaanka Gaarisa Aaden Sheekh Cabdulaahi ayaa Sabahi u sheegay in sababo badan loo aanayn karo heerka liita ee waxbarashada gobolka, sida macalimiin la'aan, duruufo waxbarashada oo xun iyo ammaan darro.
Cabdulaahi ayaa sheegay in ma'uuliyiinta arrimaha waxbarashada Gaarisa ay dib u eegeen natiijada, ayna isku raaceen in ay si wadajir ah u qaataan mas'uuliyadda arrinka dhacay.
"Waxaan rajaynaynaa in marka ay talada la wareegaan xukuumadaha cusub ee degaannada ee dhaqan-gali doonta kadib doorashooyinka guud ee 4-ta March, in aan waxba lala hari doonin sidii loo hubin lahaa in gobolku si firfircoon oo muuqata ula tartamo gobollada kale ee dalka," ayuu yiri.
Xukuumadda cusub waxa ay si toos ah u shaqaaleyn kartaa macalimiinteeda, waxayna hormarin kartaa adeegyada dhanka wax barashada, iyada oo aan ku tiirsanaaneyn xukuumadda dhexe si ay shaqada u qabato, ayuu yiri.
"Waxa jira xaalado ay dugsiyada dhiganayaan arday ka badan 600 oo ay ku soo aadeyso seddex macallin," ayuu yiri. "Isla macalimiintaa ayaa lagu khasbayaa in ay ardayda baraan maaddooyin ayan takhasus u lahayn si ay u caawiyaan."
Xujo lagu hormariyo heerka waxbarashada
Inkasta oo ay jirto qanaacadd-darradaas, dadka deegaanka cabasho uma gudbin doonaan Golaha Imtixaanaadka Qaranka Kenya ama ma dalban doonaan warqadahii imtixaanka, ayuu sheegay Boya. Taa beddelkeeda, macalimiinta, waalidiinta, mas'uuliyiinta waxbarashada iyo masuuliyiinta xukuumaddu waxa ay kadhigan doonaan natiijada liidata xujo ay ku hormariyaan heerka waxbarashada Gobolka.
KEPSHA ayaa bilowday tababaro lagu dhisayo awoodda macalimiinta, gaar ahaan gudbinta manhajka, ayuu yiri.
"Waxa aynu ogaannay in qaar ka mid ah dugsiyada aysan dhameystirin manhajka, waxaan sidoo kale fiirin doonnaa qaababka lagu hormarin karo habka waxbaridda, si markaa macalimiinta iyo ardayda ugu raaxeeystaan kaalimahooda waxbarasho," ayuu yiri.
KEPSHA waxa ay lacago ka raadinaysaa ururrada gargaarka iyo Santuukha Horumarinta Deegaanka Kenya, si ay ugu qabtaan tababarro bisha fasaxa ee April, ayuu yiri Boya. Tababarada ayaa ah barnaamij tijaabo ah oo kabilaaban doona degmada Wajeer, kadibna waxaa laga hirgalin doona gobolka oo dhan.
Maxamuud Cabdi Maxamed, oo u taagan kursiga guddoomiyanimada degaanka Wajeer, ayaa Sabahi u sheegay in si sifo dhab ah oo macne leh loogu hormariyo waxbarashada gobolka, ay xukuumadda maxalliga ahi ay wax ka qaban doonto sababaha salka u ah dhibaatada ee saameeynta ku yeeshay awoodda qoysasku u leeyhiin in ay carruurtooda u diraan dugsiyada. "Waxa aan u baahan doonnaa in aan dhisno dugsiyada ardayda lagu hayo si ay halkaa ay u dagaan kuwa qoysaskoodu ay xoolaha laguuraan," ayuu yiri. "Waxaan sidoo kale raadineynaa in aan wax ka qabano dhibaatada cunno yaraanta iyo biyo yarida taas oo lagu hubin doono in aanan wax hakad ahi ku imaan habka waxbarashada."
August 20, 2013 @ 05:13:31PM
Waxaan hambalyaynayaa mudane ibraahin iyo dhamaan hogaamiyayaasha kale ee dalalka kale, kuwaasoo iyagu dadaalkooda isu geeyay si kor loogu qaado heerka waxbarashada. 0724604577.
March 11, 2013 @ 01:32:21AM
Arrinkani caqli gal maaha, dadka soomaaliyeed ee Kenya ku nool waa inay tacliintooda kor u qaadaan, arrinkaa waan ka warwarsanahay.